Ọrụ anọ dị mkpa nke igwe kwụ otu ebe 1. Na-akwado ibu na ibu nke ahụ ụgbọ ala: kwado ịdị arọ nke ahụ ụgbọ ala, ndị ọrụ, akpa, wdg, ọkachasị iji olu ikuku na nrụgide dị na taya ahụ iji kwado ibu na ibu nke ụgbọ ala ahụ, ya mere ọ dị ezigbo mkpa ijigide ihe kwesịrị ekwesị ...
N’afọ 2020, ọrịa pneumonia na-akacha emeela gafere mba ahụ. Na ọgụ megide ọrịa ahụ, Ruiyi tire, dịka onye ndu na ụlọ ọrụ a, na-arụ ọrụ ọhaneze. Site na omume ndị dị otú ahụ dị ka ịmaliteghachi ịmalite ...
Oge oyi na-agba ịnyịnya na ice na snow
Oge okpomọkụ na-abịa ma udu mmiri na-abịa. N'ime ụbọchị oyi, oyi Ruiyi amalitela ọtụtụ taya oyi na-ekpo ọkụ: grandtrek sj8 na grandtrek sj6 maka SUV, oyi maxx02, oyi Maxx na dsx-2 maka ụgbọ ala ndị njem, iji chebe ndị na-azụ ahịa site na njem oyi. Ugbu a, mgbe ị na ...
August 25, 2017, Qingdao ruiyi igwe n'ichepụta co., Ltd. ndibọhọ asọpụrụ aha nke "Internet + ọhụrụ enterprise nke afọ 2017 ″.
site ha na 20-05-19
August 25, 2017, Qingdao ruiyi igwe n'ichepụta co., Ltd. ndibọhọ asọpụrụ aha nke "Internet + ọhụrụ enterprise nke afọ 2017 ″. Na August 25, “Qingdao Internet + innovation Summit 2017 ″ nke Qingdao news network nke ụlọ ọrụ mba ofesi nwere ...
On April 15, 2015, Qingdao ruiyi ígwè n'ichepụta co., Ltd. e ọdịda nke “top iri nlereanya ụlọ ọrụ na n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri ọhụrụ district”.
On April 15, 2015, Qingdao ruiyi ígwè n'ichepụta co., Ltd. e ọdịda nke “top iri nlereanya ụlọ ọrụ na n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri ọhụrụ district”. The ụlọ ọrụ agbaso na enterprise na nkà ihe ọmụma nke àgwà mbụ, ahịa mbụ, zuo ezu ọ bụla ọzọ na ike ọganihu ọnụ. Recea ...
Caster ụkwụ anọ, PU Wheel, China Concrete igwekota, China PU wiil, China Pu ụfụfụ Wheel, Concrete igwekota Truck,